Niharan’ny Fanenjehana Nahery Vaika ny Vavolombelona | Diary 2015
“Tsy hisy hiangana ireo”
Natao batisa tamin’ny 19 Janoary 1955 i Borbonio Aybar. Mbola voarara ny asa tamin’izay. Betsaka ny olona nampianariny Baiboly tao Monte Adentro sy Santiago. Nony nesorina ny fandrarana tamin’ny 1956, dia natao batisa ny mpianany sasany, ka anisan’izany ny vadiny.
Nivory tao Salcedo ny manam-pahefana tamin’ny tapatapaky ny Jolay 1957, mba hitady fomba hamelezana ny Vavolombelona. Hoy ny Rahalahy Aybar: “I Francisco Prats-Ramírez no tena nandray ny fitenenana. Nilaza i Prats-Ramírez fa ‘tsy hisy hiangana ireo, rehefa afaka andro vitsivitsy.’” Nosamborin’ny polisy daholo àry ny Vavolombelona rehetra tao Blanco Arriba, El Jobo, Los Cacaos, ary Monte Adentro, andro vitsivitsy taorian’izay, izany hoe tamin’ny 19 Jolay 1957.
“Anisan’ireo voasambotra koa aho”, hoy ny Rahalahy Aybar. “Nentina tany amin’ny toby miaramila tao Salcedo izahay. Tonga dia namely ahy ilay kolonely atao hoe Saladín, tamin’izahay tonga tany. Tena romotra izy sady nivandravandra be, tamin’izy nandrahona anay. Nasaina nanao laharana roa izahay, ka ny iray ho an’ny lehilahy ary ny iray ho an’ny vehivavy. Nodakadakan’ny mpiambina ny lehilahy sady novelivelesiny. Ny vehivavy indray nokapohiny tamin’ny kibay. Sady nanao an’izany izy ireo no niteny hoe: ‘Tsy hiantra anareo aho satria Katolika.’”
“Efa namaky Baiboly aho, ary fantatro fa i Jehovah no Andriamanitra”
Nasaina nandoa lamandy ny Rahalahy Aybar sady nomelohina higadra telo volana. Hoy ihany izy: “Nitsidika anay tany am-ponja ny Jeneraly Santos Marte. Hoy izy io: ‘Efa namaky Baiboly aho, ary fantatro fa i Jehovah no Andriamanitra. Tsy tokony higadra mihitsy ianareo, satria tsy nanao ratsy. Tsy misy azoko atao anefa, satria ny eveka katolika no tena nandentika anareo tatỳ. Ry zareo ihany no afaka manafoana ny sazinareo, na Ingahy Lehibe (izany hoe i Trujillo).’”
“Ianao izany no sefon’ireo?”
Anisan’ireo voasambotra ny zanakavavin’i Fidelia Jiménez sy ny zana-drahavaviny. I Fidelia no nampianatra azy rehetra ireo. Tsy voasambotra i Fidelia, kanefa nitolo-batana tany amin’ny manam-pahefana mba hogadraina. Te hampahery an’ireo tany am-ponja mantsy izy. Nitsidika ny fonja i Ludovino Fernández tamin’izany. Manamboninahitra tao amin’ny tafika izy io, ary malaza ho miavonavona sy lozabe. Nasainy nentina tany aminy i Fidelia ary nanontaniany hoe: “Ianao izany no sefon’ireo?”
Hoy i Fidelia: “Tsy sefon’ireo izany aho. Ianareo izao no sefo.”
“Pasitera izany ianao?”, hoy ihany Fernández.
“Tsy pasitera koa aho”, hoy i Fidelia. “I Jesosy no pasitera.”
“Tsy noho ny nataonao angaha moa no mampigadra an’ireo olona ireo? Tsy ianao no nampianatra azy?”
Namaly i Fidelia hoe: “Ny Baiboly no nahatonga an’ireo higadra. Nampihatra ny zavatra nianarany tao ry zareo.”
Tamin’izay indrindra no nandalo teo an-dalantsara ny rahalahy roa, dia i Negro Jiménez, zanaky ny dadatoan’i Fidelia, sy Pedro Germán. Natoka-monina izy ireo ary andeha hafindran’ny miaramila any amin’ny fonjan’ny besinimaro. Feno ra efa maina ny akanjon’i Negro, ary ny mason’i Pedro nivonto be. Hitan’i Fidelia hoe nampijalijalina tsy nisy indrafo izy ireo, ka hoy izy tamin’ilay manamboninahitra: “Izao ve no ataonareo amin’ny olona tsara fanahy, manao ny marina, ary matahotra an’Andriamanitra?” Nasain’i Fernández nentina niverina tany amin’ny efitra figadrana i Fidelia, satria hitany hoe tsy laitra natao inona.
Tsy maintsy nanana herim-po ireo mpanompon’i Jehovah tsy nivadika, teo anatrehan’izany fanenjehana nahery vaika izany. Tena be herim-po anefa izy ireo. Na ny manam-pahefana aza vaky vava. Nanoratra tany amin’ny minisitry ny raharaham-bahiny, ohatra, ilay manamboninahitra atao hoe Luis Colón, tamin’ny 31 Jolay 1957. Hoy izy: “Efa namoaka didy nandrara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny antenimieram-pirenena, vao haingana. Mbola manohy an’ilay izy foana anefa ny ankamaroan’ny mpivavaka ao amin’io sekta io.”